K: စာ < ကဗျာ < သီချင်း < ပန်းချီ
စာ < ကဗျာ < သီချင်း < ပန်းချီ
တနေ့က..ဖုန်းဆိုး ရဲ့ “၅၄. တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း..ရန်ကုန် ” ဆိုတဲ့ ကဗျာရှည်ကြီးကိုဖတ်လိုက်မိပီး ..သွေးကြောမျှင်တွေတောင်..နဲနဲတုန်ခါသွားမိတယ်......
“သန်းထွန်း..စည်းရုံး၍မရ..” ဆိုတဲ့ တိုတိုပြတ်ပြတ်.. စာတွေကိုကြိုက်တက်သလို.. အကြောင်း အရာနဲ့..အချက်အလက်တွေကိုသာ..အာရုံစိုက်ရင်း..ဆရာဦးချမ်းအေး (မောင်စူးစမ်း) ရဲ့ ဆောင်းပါး စတိုင်တွေကို ကြိုက်တတ်တဲ့..ကိုယ့်ကို... ခမ်းနားလှပတဲ့.. ကဗျာပေါင်းများစွာက.. သဘောထားကြီးစွာနဲ့ပဲ.. ပြုံးပီးနှူတ်ဆက်ထွက်ခွါသွားကြလေ့ရှိတယ်..
တနှစ်လောက်ကထင်တယ်..မိုးမခမှာပါဘူးတဲ့..“အပါယ်ခံမြို့တော် ”.ဆိုတဲ့..စာလေးတပုဒ်..။ လူတော်တော်များများလည်း..ကြိုက်ကြပုံရတယ်..အီးမေးလ်တွေနဲ့..ဟိုပို့..ဒီပို့..ပို့ကြတာ
လူသုံးများတဲ့..အနုပညာပစ္စည်းတွေထဲက.. အနုပညာ..ပါဝင်မူ..အချိူးတွေကို..အယ်လ်ဂျီဘရာသချာင်္ တပုဒ်..လုပ်ကြည့်မိတယ်..
If အနုပညာ = x,
ကျနပြေပြစ်တဲ့..စာတပုဒ် = 1 x
ထိမိလှပတဲ့..ကဗျာတပုဒ် =2x
တိုးဝင်..စူးရှတဲ့..သီချင်းတပုဒ် =3x
ဘယ်လိုမှဖော်ပြလို့မရနိုင်တဲ့..ပန်းချီတပုဒ် = (n) x
1x <>3x <>
so, စာ < ကဗျာ < သီချင်း < ပန်းချီ
အနုပညာကို အဲလိုအချိုးပြလို့ မရဘူးထင်တယ်။
ခံစားမှူနဲ့ ဘယ်လောက်တင်ပြနိူင်လဲဆိုတာကို ကြည့်ရမယ် ထင်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့က ဖုန်းဆိုးရဲ့ ကဗျာကို ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာဆို့သွားပြီး ဘာပြောရမှန်းမသိတာနဲ့ ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပဲ ပြောခဲ့တာပါ။ ကျနော်လည်း ကဗျာထက် စကားပြေကိုပဲ ပိုအားသန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သန်းထွန်း၊ မယား ၁ ဆိုတာကတော့ စကားပြေမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဗျ။ အဲဒီအကြောင်း နောက်မှ ပြောကြသေးတာပေါ့။ ဘလော့ဂါမိတ်ဆွေတဦးတိုးတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။
ကံမကုန်ရင် ဆုံကြအုံးမယ်လေ၊ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့
June 28, 2007 at 3:48 AM
U are not mathematician. And the Science and the Arts are the two different worlds. That is why we have2different degrees in education. B.Sc., and B.A., accordingly, right!